Ny Galaxy Fold dia manomboka amin'ny 18 Oktobra any Spain | Androidsis
Samsung dia nanamafy iray volana lasa izay fa ny Galaxy Fold Tokony hapetraka amin'ny tapaky ny volana oktobra any Espana, na dia tsy nomena ny daty famotsorana manokana aza. Andro vitsy lasa izay tafaporitsaka fisaorana an'i Orange ny daty tokony hamoahana azy an'ny telefaona mivalona eto amin'ny firenentsika. Saingy tsy mbola nohamafisin'ny mpanamboatra Koreana tamin'ny androny izy io. Hatramin'izao.
Samsung efa manamarina ny daty fandefasana ity Galaxy Fold any Espana ity. Ny vidin'ity fitaovana azo avadika ity avy amin'ny orinasa koreana dia naseho ihany koa, iray amin'ireo telefaona andrasana indrindra eny an-tsena amin'ity fararano ity. Izahay dia efa manana ny antsipiriany rehetra momba ny nahatongavanao tany Espana.
Raha tafaporitsaka tamin'ity herinandro ity 18 Oktobra izao vao amidy ny Galaxy Fold. Manomboka amin'ity andro ity dia afaka mividy ny telefaona Samsung mivalona amin'ny fomba ofisialy, any amin'ny magazay sy amin'ny mpandraharaha isan-karazany isika. Famotsorana andrasana fatratra, noho ny fahatarana maro dia nijaly ny telefaona.
Araka ny nohamafisin'ny orinasa, amin'ity daty ity ihany dia halefa ihany koa ny telefaona Suède, Failandy, Danemark, Norvezy, Soisa ary Polonina. Ka azontsika atao ny mahita ny fisehony manerana an'i Eropa rehefa mandeha ny herinandro. Efa mibodo tsena manandanja izy io.
Ny Galaxy Fold dia natomboka tany Espana tamin'ny endriny 4G ihany. Tsy nisy na inona na inona voalaza momba ilay kinova miaraka amin'ny 5G, ka toa tsy tafiditra amin'ny tsena anatiny izy io. Mikasika ny vidin'ny fitaovana, 2.020 euro no vidiny, araka ny efa nambaran'ny Samsung tamin'ny fomba ofisialy.
Fandefasana lehibe ho an'i Samsung. Ny Galaxy Fold dia telefaona vaovao sy andrasana fatratra, na dia misy aza ny olana sasany Izy ireo dia mandoto kely an'ity fanombohana ity eny an-tsena, izay azo antoka fa afaka manohitra azy io. Etsy ankilany, ny mpanjifa dia liana tokoa ary liana amin'ny momba io maodely io. Ho hitantsika ny fihetsiky ny tsena Espaniola.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Samsung dia manamafy ny daty fandefasana ny Galaxy Fold any Espana
Ahoana ny fomba hamaliana azy mivantana amin'ny hafatra mivantana amin'ny Instagram